Chengetedzo Kwidziridzo ye macOS Yakakwira Sierra 10.13.4 | Ndinobva mac
Apple ichangoburitsa itsva yekuchengetedza yekuvandudza kune vese vashandisi vane macOS High Sierra 10.13.4 yakaiswa, uye iyi yekuvandudza inogadzirisa mabugs uye inovandudza system chengetedzo. Mune ino kesi kuverenga kuri 2018-001 uye inowanikwa kune wese munhu.
Kuisa iyi vhezheni itsva, zvese zvatinofanirwa kuita ndeizvi svika Mac Mac Chitoro uye tinya pane yekuvandudza tebhu, mariri tinoona iyi vhezheni itsva iripo. Kamwe kurodha pasi uye kuisirwa tichafanirwa kutangidza komputa, saka kupedzisa mabasa usati wagadzirisa kwakakosha.
Ichi chiitiko chekuchengetedza chinoburitswa mwedzi mushure mekupedzisira vhezheni yeMacOS High Sierra 10.13.4 yasvika, asi isu hatiratidzike seine chero zvikanganiso zvinooneka mune iyi vhezheni. MuApple ivo vatoyambira izvo usaburitse dambudziko rakagadziriswa mukuchengetedzwa kwekuchengetedza:
Kuti tidzivirire vatengi vedu, Apple haizoburitse pachena, kukurukura, kana kusimbisa nyaya dzekuchengetedza kudzamara kuferefetwa kwaitwa uye kudzokororwa kwakakodzera kana shanduro dziripo. Dzazvino shanduro dzakanyorwa mune ino gwaro.
Chero zvazvingaitika, kambani inotangisa iyo nyowani vhezheni nekuda kwechipembenene uye zvinofanirwa kuitwa nevashandisi kuiisa nekukasira kugadzirisa dambudziko. Chero pese panoburitswa chengetedzo kunokosha kuti uvandudze.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Chengetedzo inovandudza macOS Yakakwira Sierra 10.13.4
Zvakanaka, dambudziko rangu nekubatana kweWi-Fi harina kugadziriswa, ini ndinoenderera nenyaya kuti ndinofanira kubvisa Wi-Fi ndobva ndazvibatanidzazve pamichina yangu miviri, uye ndinotya kudzima Watch, ini isai munhandare yendege kurara uye kunongedza bhora.
Pindura kuna Bunion
Mhoro Vese im rookie pano. Chinyorwa chakanaka! Thx! Ida nyaya dzako!
Ndiri kunetseka kuita iyi yekuvandudza. (nekutenda kune chero rubatsiro iwe rwaunogona kundipa)
Ini ndinovhura iyo appstore uye ndigadzirise, iyo skrini inosviba asi haina kupedzisa kuvhara, iyo cursor ichiripo ini ndinogona kuifambisa, ndinofanira kudzima nemaoko mac mini uye pandinovhura zvakare iyo yekuvandudza "ndisina kukwidziridza" inoonekwa muchitoro.
Mac mini kunonoka 2012 6,1 (I5, 2,5 GHz)
Yakakwirira sierra 10.13.4
ssd drive 256 gb APFS SATA "yakakosha"
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri saRicardo, ndine matambudziko ekugadzirisa iyi. (nekutenda kune chero rubatsiro iwe rwaunogona kundipa)
Ini ndinovhura iyo appstore uye ndigadzirise, iyo skrini inotsva asi haipedze kuvhara, iyo inotora ichiripo, ndinogona kuifambisa, ndinofanira kudzima nemaoko mac mini uye pandinovhura zvakare, iyo yekuvandudza "pasina kukwidziridzwa "inowanikwa muchitoro.
Ndine dambudziko rakafanana naJuan Carlos naRicardo… pane chero munhu ane mhinduro?
Maitiro ekukurumidza kuvhura zvinongedzo kubva kuSotlight